Infochimps: Ireo manam-pahaizana momba ny lozisialy data lehibe | Martech Zone
Amin'ny maha masoivohom-pokontany antsika, ny mpanjifanay dia mangataka anay bebe kokoa hamantatra ny habetsaky ny angon-drakitra omena azy ireo avy amin'ny motera fitaterany - CRM, mailaka, haino aman-jery sosialy, sns. magazay ao amin'ny mpizara anay anatiny, nanotra azy, ary avy eo nanondrana ireo vaovao ilainay.
Ny data anefa dia nanjary sarotra kokoa tamin'ny sivana, ny fizarana ary ny fanendrena. Ny media sosialy, ohatra, dia manome tady sy URL misy ny fampahalalana izay tsy maintsy dinihina mba hahafahana manisy marika, manasokajy ary mitatitra azy tsara. Ary ny varavarankelin'ny fotoana angatahana amintsika hamaky ity angon-drakitra ity dia mihakely hatrany hatrany. Ny habetsaky ny angon-drakitra dia mihalehibe sy lehibe kokoa - ary sarotra kokoa ny mitantana azy. Mila valiny ireo mpanjifantsika… izao.
Ampidiro ny vahaolana data lehibe toa ny Infochimps. Nanomboka ny orinasan-dry zareo Infochimps tamin'ny fifantohana fitantanana databets an'arivony miaraka amin'ny nofinofy ho tonga 'wikipedia' data. Na izany aza, rehefa nandeha ny fotoana, dia hitan'izy ireo fa ny sanda sy ny fahaizana tena nomen'izy ireo dia ny fananganana fotodrafitrasa sy serivisy afaka mitantana angon-drakitra lehibe.
Na fanombohana vaovao ianao izay mipoapoaka amin'ny fitomboana ary milevina ao anaty angona, na orinasam-pandraharahana mila fanampiana hametrahana vahaolana izay hanampy amin'ny fitrandrahana, hampiodinana ary hanehoana angona azo ampiharina, Infochimps dia afaka manampy. Tombony fanampiny ho an'ny sehatra amin'ny maha serivisy azy? Efa manana datasets 15,000 mahery izy ireo, ary iray amin'ireo vitsy Gip mpiara-miasa manome ny firehose ny angona media sosialy.
Ny fampielezana mahazatra miaraka amin'ny Infochimps dia fitambaran'ny serivisy ao an-trano hananganana fotodrafitrasa miaraka amin'ny fidiran'ny mpampiasa sy fampivelarana ireo fitaovana. Infochimps dia tsy manam-paharoa eo amin'ireo sehatra angon-drakitra lehibe noho ny fahalalahany amin'ny haben'ny fametrahana.
Layeran'ny fotodrafitrasa - Ireo masinina ifotony izay manome hery ny fanangonana angon-drakitra sy ny fampidirana azy, amin'ny fotoana tena izy Analytics, batch lehibe Analytics, ary tahiry data.
Serivisy fanaterana data ™ - DDS dia mirindra tsy misy fangarony amin'ny tontolo misy anao, manome ny fahaizan'ny ETL (extract-transform-load) tena azo ovaina ary manome ny fotoana azo antoka, fandalinana data.
Data Management - Na ny HBase, Cassandra, Elasticsearch, MongoDB, MySQL, na ny hafa dia miantoka ny fitahirizana angon-drakitra mety tsara ho an'ny asa hatrany an-tananao ianao.
Cloud Hadoop - Manaova famakafakana andiam-be arakaraka ny ilainao azy, na ny cluster Hadoop ad-hoc na ny onjam-pamokarana matetika. Ampidiro ny fitaovana rehetra ilainao, amin'ny alàlan'ny fanitsiana sy fanamafisana araka ny fangatahana.
Application Layer - Sehatra hanamorana ny fidiran'ny Big Data, anisan'izany ny streamline Analytics fitaovana fanoratana, tabilao misy sary ary API mahery.
Wukong - manome simplified Analytics traikefa amin'ny fanoratana. Soraty ny Analytics ao amin'ny Ruby-friendly developer, mampandeha kaody eo an-toerana raha te hahita haingana kokoa ny tsingerin'ny fampandrosoana ary misy ny fampiasana ankehitriny Analytics soratra.
Dashpot ™ - Mamorona sary an-tsary ny fotoana tena izy avy amin'ny angon-drakitra misimisy, mahazo fahitana lalina ao amin'ny rafitry ny Platform anao, ary atombohy haingana ary atsaharo ireo singa miasa ao amin'ireo vondron-tahirinao.
Platform API - Miaraka amin'ny API mitambatra, ny fanaraha-maso ny sehatra sy ny fahitana ny angona ao anatiny dia fangatahana tranonkala vitsivitsy monja. Amin'ny beta izao.
Ohatra iray: orinasa lehibe iray an'ny haino aman-jery lehibe dia nanangana sehatra fihainoana haino aman-jery sosialy izay manangona 18 na mihoatra ny angon-drakitra media sosialy. Ny renirano dia ampitomboina miaraka amin'ny fampahalalana momba ny lahy sy ny vavy, atambatra ho fampahalalana fehin-kevitra, navarina tamin'ny kaontera, nampiharina ny fihetseham-po ary nanao fampandrenesana rehefa nangatahina. Ny tanjon'ny rafitra dia ny hanome ny mpanjifa vaovao tena izy. Ny mpanjifa hafa dia misy Cisco, BlackLocus, Runa, Whaleshark Media, ary Cava manga.
Manomàna demo miaraka amin'ny Infochimps na mailaka info@infochimps.com fa more Info.
Tags: APIlehiberahona hadoopdashpotserivisy fanaterana dataangona fitantananahadoopinfochimpswukong
App Press: Mpamorona ny App ho an'ny mpamorona
Ajanony ny firesahana dia henoy
7 Feb 2013 tamin'ny 8:51 maraina
Raha tsy mikorisa aho, infochimp dia karazana serivisy afaka mihaino izay takian'ny olona toy izany amin'ny medai social ary avy eo ny mpanjifa dia afaka manomana zavatra mifanaraka amin'izany. Ho liana amin'ny tranokalako ihany koa aho.
7 Mey 2013 tamin'ny 4:55 hariva
Iray amin'ireo loharanom-pahalalana azon'izy ireo omena izany ary azonao atao ny manangana serivisy fanaraha-maso manodidina izany. Na izany aza, tsy izany no lahasan'izy ireo voalohany.